Soomaali hooy la'aan ku ah Talyaaniga - BBC Somali
Magaalada Firenze ee dalka Talyaaniga ayaa waxa uu isku dhacyo ku dhex maray dhallinyaro Soomaali ah iyo ciidamada booliska, arrintaa oo sababtay in qaar ka mid ah dhallinyaradaasi Soomaalida ahi ay waxyeelo soo gaarto.
Arrintan ayaa timid kaddib markii ku dhawaad 130 dhallinyaro Soomaali ah oo halkaasi qaxooti ku ah oo uu ka gubtay guri ay ku noolaayeen ay ku dhaqaaqeen dibadbax ay ku dalbanayeen in dowladdu ay hooy siiso.
Qaar ka mid ah dhallinyaradan Soomaalida ah ayaa BBC-da u sheegay in hadda ay seexdaan garoon kor ka dedan oo kubadda koleyga lagu cayaaro, dhibaatada ugu darranna ay tahay in ay awoodi la' yihiin in ay aastaan wiil uga dhintay dab ka kacay guri ay deganaayeen.
Dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah Cabdicaziiz Cabdullaahi Abtidoon oo ku magac dheer Ciribey, Xasan Cali Geele ayuu qadka taleefoonka ugu waramay.
Maqal Dhakhtar Soomaaliyeed oo abaalmarin caalami ah ay gudoonsiiyey hay'adda WHO
Dhakhtar Soomaaliyeed oo abaalmarin caalami ah ay gudoonsiiyey hay'adda WHO